MiCloud RedMi(HM 1W) - MYSTERY ZILLION
MiCloud RedMi(HM 1W)
ညီမ micloud သုံးချင်လို့ mi.com မှာ account တစ်ခုသွားဖွင့်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် mi cloud service ကို သုံးလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။
phone နဲ့ သွား bind ပါပဲ ပြောနေတယ်။ verification code ကလဲ ရောက်မလာဘူး။ အဲ့ဒါ connection ကျလို့ သူတို့ဆီက verification code က မရောက်တာလား။ ဒါမှမဟုတ် မြန်မာပြည်ရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်နဲ့မို့လို့ မရတာလား။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာ သိချင်လို့ပါရှင့်။
may be MPT phone number. MPT phone number can't receive SMS.
Please chose register using email address instead of phone number.
မရဘူး အစ်ကိုရယ်။ email ရွေးလို့ကို မရတာ။
သူ့ရဲ့ mi account ကို ဖွင့်ရင်သာ email ပေးရွေးတာ။ mi cloud ကို သွားလိုက်တာနဲ့ phone number ပဲ သွား bind ခိုင်းတယ်။ :-w
So, use with Ooredoo phone number
MPT numbers won't receive the message. But it might work with the new carriers. Or you should askafriend, living inaforeign country, to help you.